Fanjakana mitanjaka fa tsy matanjaka | NewsMada
Na inona tenenina, tsy takona afenina ny fahalemen’ny fitondrana: mitanjaka fa tsy matanjaka. Tsy mahavita ny asany ny fitondram-panjakana. Lasa misahana izany ho azy ny vahoaka. Eo, ohatra, ny fiarovana ny tanindrazana tsy ho lasan’ny vahiny. Ny mpitondra aza no fositra, mivaro-tanindrazana.
Mbola endrik’izay fanaovan’ny vahoaka ny asa tsy vita sy tsy voafehin’ny fitondrana mitanjaka fa tsy matanjaka izay koa ny fitsaram-bahoaka etsy sy eroa. Na manao ny asany izao aza ny mpitandro filaminana sy ny mpitsara: tsy atokisana sy tsy zakan’ny vahoaka ifotony intsony ny fitondrana foibe?
Tsy afa-manoatra fa mitazam-potsiny ireo mpitandro filaminana hoe fitaovam-pamoretana sy fampihorohoroan’ny mpitondra, rehefa sendra ny herim-bahoaka, fitsaram-bahoaka… Amin’izao fotoana izao, matahotra fitsaram-bahoaka ny mpitandro filaminana any amin’ny faritra sasany noho ny fahalemeny.
Tsy mitokantokana ny raharaha ka hoe odian-tsy hita, azo afenina, amonoana afo… Mihamitombo sy saika mahahenika an’i Madagasikara izao ny fitsaram-bahoaka. Tsy hoe mifanaraka hanao izany ny vahoaka ifotony, fa tsy hita intsony izay azo atokisana. Miverina aminy ny fahefana amin’izay lafiny izay?
Raha azo itarafana ny fanjakana foibe hatrany ny Renivohitry ny firenena iray: miharihary izao fa tsy mahafehy Tafika ny fanjakana. Samy manao izay saim-pantany? Misondrovaka ny miaramila, rehefa ny vady aman-janany no iharan’ny herisetra fanaony amin’ny vahoaka noho ny baikon’ny mpitondra.
Tsy ho taitra ny mpitondra raha tsy mihatra aminy na ny vady aman-janany ny raharaha? Tsy mahita vahaolana afa-tsy ny fampandriana adrisa amin’ny hoe fanarahan-dalàna, fanajana zon’olombelona… Mba manao izany ve ny mpitondra? Na tsy hita be ihany izay hoe tany tan-dalàna, fitondrana tsara tantana…
Mbola tsy ho taitra ihany ve amin’izao? Efa mitanjaka loatra amin’ity hoe fanjakana tsy matanjaka. Tsy to teny: tsy mahatanteraka izay lazainy, tsy inoan’ny vahoaka teny. Inona no atao? Izay mahafehy tena, mahafehy fanjakana…